Ny fampandrosoana maharitra an’i Mahanoro no tanjona - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsy hisoronako e!! il y a 10 jours
Communication politique en période électorale il y a 11 jours
Faut-il changer les jours fériés en France ? il y a 12 jours
La CNaPS défend un régime de protection sociale pour les paysans il y a 13 jours
« Miasa hatrany ny fikambanana ary tsy voatery horesahana an-gazety izany » hoy Randriantsarafara Eliot Stany, filohan’ny Association Fandrosoana.
Raha tamin’ny voalohan’ny volana janoary ohatra dia nizara hafaliana tamin’ny vahoaka marefo ny fikambanana ka ny filoha mivady no nitarika ny fizarana nofon-kena mitam-pihavanana. « Izany no natao dia noho ny fahatsampana fa na dia tsy manana ny ampy fa mahasambatra ny mifanampy » hoy ny filohan’ny fikambanana nanazava.
Tamin’ny volana desambra 2018 kosa dia nanentana ny olona hanadio ny lakan-drano ny fikambanana. Niara-nanao izany tamin’ny vahoaka andro fanokafana ny hetsika ny mpitarika ny fikambanana ho fisantarana ny asa. Avy eo kosa dia napetraka tamin’ny fokonolona ny fanohizana ny asa. Olona 50 isan’andro no nanao ny asa ka tao amin’ny fokontany Ambalakininina no nanombohana azy. Naharitra 7 andro ny asa tamin’ireo fokontany hafa. Io resaka fanadiovana io dia mbola nanomezan’ny fikambanana ohatra tamin’ny fiandohan’ny volana febroary 2019 teo. Nanadio ny tananan’i Mahanoro ny mpikambana. « Ny tanjona dia ny fitaritana ny olona hahalala madio, ny fanomezana ohatra ho azy ireo fa afaka mifanome tanana ny rehetra hikajy izany fahadiovana izany » hoy Randriantsarafara.
Isan’ny olana sedrain’ny mponina ny fisian’ny fahatapahan’ny jiro na delesitazy. Tena mampalahelo ny mpiasan’ny hopitaly manoloana izany fa tsy afaka manatanteraka aaraka ny tokony ho izy ny asany. Manoloana izany ary ho fanampiana ny hopitaly be ao Mahanoro dia nanolotra groupe électrogène iray ny Association Fandrosoana. Ny fikambanana no niantoka ny fitaovana sy ny fametrahana azy ho azo ampiasaina avy hatrany. « Miantoka ny solika mandritra ny enim-bolana ny fikambanana » hoy ny mpitarika ny fikambanana nandritra ny lanonana tsotra fanolorana io fitaovana io tao amin’ny hopitalibe-n’i Mahanoro ny volana desambra lasa iny.
Santionany amin’ny asa fifanampiana ireo notsiahivin’ny filohan’ny fikambanana ireo. Nambarany fa resy lahatra ny mpikambana ao amin’ny Association Fandrosoana fa hita ao amin’ny distrika avokoa ny ilaina entina hampandrosoana izany disitrika izany. Manan-karena raha ny distrikan’i Mahanoro. Mitodika amin’ny fandrafetana drafi-pampandrosoana ny distrika ny fikambanana ary handina ireo harena ireo ka hisiraka ny vokatra ny mponina fa tsy hijanona amin’ny fanaovana asa soa ihany. « Misy olona mahay eo anivon’ny distrika ary manana olona manana traikefa ny fikambanana hanatanteraka ny fampandrosoana maharitra ho an’ny distrika » hoy ny filoha Eliot. Nohamafisina hatrany fa afaka mifanome tanana amin’ny rehetra ny fiambanana indrindra amin’ireo mpitondra aty ifotony. Tsy natao ho mpifaninana fa mifameno ary fomba fiteny anivon’ny fikambanana ny hoe « tsy misy manana ny ampy fa tsara ny mifanampy ». Ho kabary ambony vavahady sa hivadika ho asa ? iraha-mahita eo ny tohiny.
Airtel M’Lay : Proposition de nouveaux tarifs de communication - il y a 1 jour
Sport : ﻿ Quand le foot rend fou - il y a 3 jours
CNaPS : La protection sociale pour tous en marche à Vatomandry - il y a 3 jours
CNaPS – FJKM : La collaboration continue à Maevatanàna - il y a 9 jours